Wararka Maanta: Talaado, Jan 18, 2022-Taliyaha Ciidanka Dhulka Jenaraal Biixi oo ku guuleystay inuu heshiis hordhac ah la gaaro Golaha Kacdoonka Hiiraan
Taliyaha ciidanka dhulka dowladda Soomaaliya oo shalay gaaray magaalada Baledweyne ayaa ku guuleystay in markii ugu horeysay ay wada kulmaan Jenaraal xuud iyo xubno ka tirsan Hirshabeelle oo dagaal ka dhaxeeyay, islamarkaana ay u suurta gashay inuu la galo Golaha Kacdoonka is afgarad hordhac ah.
Shaafici Maxamed Yuusuf oo ka mid ahaa xubnaha Golaha Kacdoonka Hiiraan ee qeybta ka ahaa kulanka maanta ka dhacay Xerada Lamagalaay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay iney heshiis hordhac ah ay wada gaareen Golaha Kacdoonka iyo wafdiga ka socday dowladda dhexe ee uu hoggaaminaayay Jenaraal Biixi.
"Inaga dowlad diid maheyn ee marwalba waxan sugeynay cid dowladda kasocota oo inagala hadashada tabashadeena maanta waxaana isla afgaranay taliyaha Lugta ineysan dhicin xabad dambe oo wax walba heshiis iyo wadahal lagu dhameeyo" ayuu yiri Shaafici Maxamed.
Injineer Khaliif Idiris oo ka mid ahaa xubnaha kulanka ka qeyb galay ayaa dhankiisa sheegay in taliyaha ciidanka Lugta ay isla gaareen is afgarad hordhac ah, islamarkaana wax walba oo dhiman la dhameystiri doono.
"Waxaan cadeynaya anigo Khaliif Idiris ah inaan heshiis nabadeed oo is afgarad ah ka qaadanay dowladda Soomaaliya, waxii dhimana aan si nabad ah ku dhameyneyno Soomaali sidaas ha ogaato" ayuu yiri Injineer Khaliif Idiris.
Majirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle oo ku aadan kulanka maanta dhexmaray wafdiga dowladda dhexe ee uu hoggaaminaayay Jenaraal Biixi ayna qeybta ka ahayeen masuuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle.